“ထမီချွတ်၏ မချွတ်၏” | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » “ထမီချွတ်၏ မချွတ်၏”
Posted by ကိုပေါက်(မန္တလေး) on Nov 27, 2011 in My Dear Diary | 29 comments
ပြီးခဲ့တဲ့ဥပုဒ်နေ့က ကျနော်တို့ ကြီးမိုက်ကြီးတွေ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာဆုံကြတော့
ရှေးက သီချင်းရေဆရာကြီးတွေရဲ့စာသားတွေက ဒီနေ့ထိခေတ်မှီတဲ့နေအကြောင်း
အဲဒီအထဲက မခံချင်စရာကောင်းတဲ့စာသားလေးပါ ပါတယ်။
“ဆော်ဒါလင်မနစ်ရည် ဖောက်လိုက်ရင်မြည်သတဲ့ ဘာသာခြားနဲ့ကုလားကဆိုပြန်သည်”
ကျနော်တို့မြန်မာတွေက ဘုန်းတန်ခိုးတို့ဘာတိုကို ပြောတတ်တာကိုးဗျ။
အဲတော့ မြန်မာမင်းတွေမှာ ဘုန်း ရှိတယ်လို့ပြောတော့ အဲဒါကို အင်္ဂလိပ်တွေက
နှိမ့်ချတဲ့အနေနဲ့ဘုန်း ဆိုတာ ဘိလပ်ရည်ပုလင်းဝထိပ်က
ဖန်သီးလေးကို ဖောက်ထုတ်လိုက်ရင် ဖုန်း ဆိုမြည်တာနဲ့အတူတူဘဲလို့ နှိမ်ပြီး ပြောလိုက်တာပါ။
အဲဒီ ဖုန်းကနဲမြည်တဲ့အသံအကြောင်းကိုပြောရင်းကနေယောက်ျားတို့ ဘုန်းအကြောင်းရောက်သွားပါတယ်။
ယောကျာ်းတို့ ဘုန်းလက်ရုံး လိုပပေါ့လေ။
မိန်းမထမီလို့ ဟာမျိုးအောက်ရောက်ရင် ဘုန်းနိမ့်တယ်လို့ တစ်ယောက်ကတင်ပြလာပါတယ်။
အဲလိုပြောနေတော့ မှန်တာမမှန်တာအပထား အနိုင်မခံအရှုံးမပေးစိတ်ဓါတ်နဲ့
ရေနွေးကြမ်းလဲကုန် အချိန်တွေလဲကုန် ပြောရင်းနဲ့ မာန်တွေပါလာတော့
လက်ဖက်ရည်ပန်းကန်၊အကြမ်းပန်ကန်ရော ခုန်တွေရော ခုန်ကုန်ပါတယ်။
ဘာမဟုတ်တာလေးနဲ့ ထိုးကြ ကြိတ်ကြဖြစ်ကုန်မှာစိုးလို့ပေါ့။
အဲဒီအချိန်မှာ ပေါက်တတ်ကရပြောတတ်တဲ့ “သန်းလွင်”က
“ ကဲ မငြင်းကြနဲ့တော့ သူကြားဘူးတာလေးပြောပြမယ်။
ပြီးတော့ မှဒီအကြောင်းကိုဆက်ငြင်းကြဗျာ” ဆိုပြီးပြောပါတယ်။
ဒီကောင်ပေါက်တတ်ကရ ပြောတတ်တာမှန်ပေမယ့် သူပြောလိုက်ရင် ထူးထူးဆန်းဆန်း
ဆိုတော့ အားလုံးက သူပြောမှာကို စိတ်ဝင်တစားနဲ့နားထောင်ချင်ကြပါတယ်။
စိတ်မရှည်တတ်တဲ့စိန်မောင်က “ပြောစရာရှိမြန်မြန်ပြောကွာ”ဆိုပြီး လော တော့မှ
နောက် မြို့ထဲနဲ့သိပ်မဝေးတာရယ် အိမ်လခကလဲသိပ်မများတော့ လခစား
အဲဒီအရပ်ထဲမှာ ခြံဝင်းကြီးတစ်ခုထဲမှာ အိမ်တန်းလျားဆောက်ပြီး ငှားတဲ့သူတွေလဲရှိပါတယ်။
အဲဒီခြံကြီးထဲက အိမ်လေးတွေကအိမ်လခဈေးသက်သာတော့ နေတဲ့လူတွေကနည်းနည်းတော့
ကျနော်တို့နှစ်ယောက်လက်ထပ်မယ်ဆိုတော့ အိမ်ခွဲနေမယ်ဆိုပြီး ဒီရပ်ကွက်ထဲမှာဘဲ လာငှားနေလိုက်တာပါ။
ကျနော်တို့အိမ်နဲ့ သုံးအိမ်လောက်မှာ ကျနော်တို့လိုဘဲအိမ်ငှားနေတဲ့
လူငယ်ချင်းဆိုတော့လဲ မြင်ရင်နုတ်ဆက်ပြုံးပြ ဒီထက်တော့ ပိုမသိပါဘူး။
ကျနော်တို့က အိမ်ရှင်နဲ့ကျနော်တို့ ဟိုဘက်ခန်းဒီဘက်ခန်း။ တစ်ခြမ်းစီဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့ကျဉ်းပါတယ်။
သူတို့နေတဲ့အိမ်လေးကတော့ အိမ်ရှင်က အိမ်ရှေ့မှာ နှစ်ထပ်နံကပ်တိုက်နဲ့နေပြီး
သူတို့အိမ်လေးရဲ့ဘေးဘက်မှာ တော့ အိမ်ရှင်ရော သူတို့ပါ အတူသုံးတဲ့ရေလောင်းအိမ်သာဆောက်ထားပါတယ်။
အဲတော့ အိမ်သာသွားမယ်ဆိုရင် သူတို့အိမ်ရဲ့ ၀ရန်တာအောက်ကနေတော့ ဖြတ်သွားရပါတယ်။
သူတို့က အိမ်သီးသန့်လိုဖြစ်နေတော့ သူတို့အိမ်လေးကိုကျနော်တို့ကသဘောကျခဲ့ကြတာပေါ့။
သူတို့လင်မယားကလဲ မနက်အလုပ်သွား ညမှပြန်ဆိုတော့ ညအိပ်ချိန်လောက်ဘဲနေတဲ့သဘောပါဘဲ။
ဒါပေမယ့် သူတို့က ဘာသာခြားဖြစ်နေတာရယ် ဘာသိဘာသာနေတတ်တာရယ်ကြောင့်
ဒါပေမယ့်လဲ အိမ်ရှင်နဲ့တော့ မပြေလည်ဘူးဆိုတဲ့အသံမကြားခဲ့ရပါဘူး။
တစ်ရက်တော့ သူတို့အိမ်ဘက်က ဆူဆူညံညံကြားလို့ထွက်ကြည့်လိုက်တော့ သူတို့လင်မယားက အိမ်အပေါ်က။
အိမ်ရှင်မိသားစုတွေက အိမ်အောက်ကအော်ဟစ်ပြီး ရန်တွေဖြစ်နေကြတာပါ။
ရပ်ကွက်ထုံးစံအတိုင်း ရန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ ၀ိုင်းအုံကြည့်ကြတာပေါ့။
မသဲမကွဲကြားနေရတာတော့ “ကျမတို့ က မိုက်ရိုင်းတဲ့အထဲမပါဘူး၊လူများတယ်ဆိုပြီး လာအနိုင်မကျင့်နဲ့ ”လို့
“သက်သက်မဲ့အကျင့်ယုတ်ပြီး ငါတို့အိမ်ကယောက်ျားတွေ ဘုန်းနိမ့်အောင်လုပ်တာ”ဆိုပြီး အော်ဟစ်ပြောနေတာကိုတော့
မနေ့တုံးက ကောင်မလေးက ရေလဲထမိန်ရယ် သူ့ထမိန်လျှော်ထားတာရယ်ကို ၀ရန်တာမှာလှမ်းသွားပါသတဲ့။
အဲဒီမှာ အဲဒီလူရဲ့မိန်းမက ကောင်မလေးလှန်းထားတဲ့ထမီတွေကိုတုတ်နဲ့ထိုးချပြီး အဲဒီနားက ဗွက်အိုင်ထဲကို ပစ်ချလိုက်ပါသတဲ့။
ကောင်မလေးအလုပ်က ပြန်လာတော့ သူ့ထမီအကောင်းတွေ ဗွက်ထဲရောက်ကုန်တော့ စိတ်တိုပြီးဆဲမိပါသတဲ့။
အဲဒီမှာ အိမ်ရှင်ရဲ့အိမ်ရှင်ရော သူ့ သမီးတွေ ချွေးမတွေကရောဝိုင်းပြီး ကောင်မလေးကိုဆဲကြပါသတဲ့။
အဓိကကတော့ ကောင်မလေးက ၀ရန်တာမှာထမီလှန်းထားတဲ့အောက်က သူတို့အိမ်နေတဲ့ယောက်ျားလေးတွေ
ကောင်မလေးကလဲ“အခုရက်မုိးဆက်တာရွာတော့ နေပွင့်တဲ့အချိန်လေးမှာ ခြောက်အောင်အိမ်အပြင်ထုတ်လှန်းတာ
ဒါပေမယ့် အိမ်ရှင်ဘက်က လူများတော့ တစ်ယောက်တစ်ပေါက်နဲ့ဆိုတော့မပြီးနိုင်မစီးနိုင်ပေါ့၊
တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်အပြန်အလှန်ပြောတာကြာလာတော့ အစက ဘေးကနေကြည့်နေတဲ့ပရိသတ်ကလဲ
” ဒီလောက်လေးနဲ့အကဲကိုင်တာ ကောင်မလေးက နှစ်ယောက်ထဲဆိုပြီး သက်သက်မဲ့ ဗိုလ်ကျတာပါ”
“ဒီအိမ်က ယောက်ျားလေးတွေရှိတာသိရက်နဲ့လုပ်တာ ဘုန်းနိမ့်ကုန်တာပေါ့ တမင်မိုက်ရိုင်းတာပါအေ”
”ကောင်ကလေးတွေကလဲ လူမြင်ကွင်းမှာ မိန်းမထမီ မလှမ်းသင့်ဘူး၊
အိမ်ရှင်ကလဲမြင်ရင် တက်ဖယ်လိုက်ရင်ရနေတာကို ပျက်စီးအောင်ဗွက်ထဲပစ်ချတာတော့ မလုပ်သင့်ဘူး”
သိပ်မကြာခင်လေးတင်မှာ ဟိုဘက်ရပ်ကွက်မှနေတဲ့ ကောင်မလေးဘက်က လူတွေရောက်လာတော့
ရန်ပွဲအရှိန်က ပိုမြင့်လာပြီး တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ငယ်ကျိုးငယ်နာတွေပါ ဖော်ပြီး အော်ဟစ်ဆဲတဲ့အဆင့်ရောက်လာပါတယ်။
ပွဲကြည့်ပရိသတ်ကလဲ အစကတော့ ဝေဖန်ချက်ထင်မြင်ချက်တွေပေးရုံသက်သက်။
နောက်ကြာလာတော့ အိမ်ရှင်ဘက်နဲ့ အိမ်ငှားဘက် ဂိုဏ်းတွေကွဲပြီး ပွဲကြည့်ပရိသတ်အခြင်းခြင်း
ခဏနေတော့ ဟိုဘက်အမျိုးဒီဘက်အမျိုး သတင်းကြားနဲ့လိုက်လာပြီး ယောက်ျားတွေပါ ချမယ်ရိုက်မယ်ဆိုဖြစ်လာပါတယ်။
ပိုဆိုးသွားတာက တစ်ယောက်က ဖွလိုက်တော့ မဆီမဆိုင်တဲ့လူမျုိးရေးတွေပါ ပါလာပြီးရန်ပွဲကကြီးကျယ်သွားပါရော။
အဲတော့မှ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်သူတွေရောက်လာပြီးနှစ်ဖက်လုံးကို ရုံးခေါ်သွားရတဲ့အဆင့်ထိရောက်သွားပါသတဲ့။
ရုံးရောက်တော့လဲ နှစ်ဖက်က စကားများလို့မပြီး။
ဒီပြဿနာရဲ့အစက အိမ်ရှင်က အိမ်ငှားတွေကို စာချုပ်မပြည့်ခင်ပြောင်းပေးစေချင်တာက စတာပါတဲ့။
ဒါပေမယ့်လဲ အိမ်ငှားကောင်ကလေးတွေကလဲ နှစ်ပြည့်မှဖယ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုပြီး အချေအတင်ဖြစ်ကြပါသတဲ့။
စပေါ်နှစ်ဆ ပြန်အမ်းမယ်အိမ်ပြန်လိုချင်တယ်ပြောလဲမရ ဆိုတော့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်မသင့်မတင့်စဖြစ်ပါသတဲ့။
အဲဒီရက်မှာ မိုးတွေက ဆက်တိုက်ရွာ အ၀တ်တွေက မခြောက်ဆိုတော့ နေလေးပွင့်တဲ့ရက်မှာ ယောကျာ်းဝတ်ရော
အဲဒီမှာ ရုံးက တာဝန်ရှိတဲ့လူတွေက နှစ်ဖက်စလုံးကို မေးတော့တာပေါ့။
ဒါပေမယ့် အလုအယက်ပြောကြ ၀ိုင်းအုံပြောကြတော့ ဘယ်သူ့စကားနားထောင်ရမှန်းမသိ။
တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက် အခြေအတင်ပြောကြ ပွဲကြည့်ပရိသတ်ကလဲဝိုင်းအော်နဲ့ဆိုတော့ အုတ်အုတ်ကြွက်ကြွက်။
အဲတော့ ဒီကိစ္စကိုဖြေရှင်းပေးဘို့ အရပ်ထဲက သမာဓိရှိပြီးအားလုံးလေးစားကြတဲ့” ဗမာပေါင်ချိန် ဦးလှဖေ” ကိုသွားခေါ်လာပါသတဲ့။
အဲတော့ တစ်ယောက်ခြင်းဖြေဆိုပြီး ကောင်မလေးကို အရင်စမေးပါတယ်။
ထမီလှန်းတာကလဲ အခုမှမဟုတ်ဘူး အရင်ကတည်းကလှန်းတာပါ”လို့ဖြေတော့။
“ဒါကြောင့် မို့ အခုရက်သူတို့အိမ်ကယောက်ျားတွေဘာလုပ်လုပ်အဆင်မပြေတာ”ဆိုပြီးအိမ်ရှင်ဘက်က
ဗျောက်ဖောက်သံကြားတော့ ဗမာပေါင်ချိန်က ဟိတ်ဆိုအသံပေးလိုက်မှအားလုံးတိတ်သွားပါသတဲ့။
နောက်အိမ်ရှင်ဘက်ကိုမေးတော့ ပြောချင်တဲ့သူတွေများနေလို့ “တစ်ယောက်ထဲဘဲပြော”ဆိုပြီး
ခပ်မာမာနဲ့ဟောက်လိုက်မှ သူတို့အိမ်က အစွာဆုံးအလတ်မ ကနုပ်ခမ်းတလန်ပန်းတ်လန်နဲ့
အဆုံးသတ်မှာတော့ ဘာသာခြားကြောင့်ဆိုတာကို ဖိတွယ်သွားပါလေရော။
သူတို့နှစ်ဖက်ပြောတာလဲနားထောင်ပြီးတော့ ဗမာပေါင်ချိန်လဲ စိတ်တော့အိုက်သွားပုံရပါတယ်။
အဲဒါနဲ့ အိတ်ထဲပါတဲ့ကွမ်းယာလေးကို ထုတ်ပြီး မြုံ့ရင်းစဉ်းစားနေပါသတဲ့။
ပရိသတ်ကတော့ ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဆိုတာကို အရမ်းကိုသိချင်တော့
အချင်းချင်းတွတ်ထိုး အသံတော့ မထွက်ရဲ အော်ခွဲလို်က်မှာတော့ကြောက်ပါတယ်။
ကွမ်းတစ်ယာလောက်လဲကုန်ရော သူ့မျက်နှာက ခပ်ပြုံးပြုံးလေးဖြစ်သွားပါတယ်။
ပြီးတော့မှ အရင်ဆုံးကောင်မလေးကို စပြီးဆုံးမပါတယ်။
နောင်လူမြင်ကွင်းမှာ မိန်းမအသုံးအဆောင်တွေကို မလှန်းသင့်ကြောင်း
လူမြင်တင့်တယ်အောင် နေထိုင်သင့်ကြောင်း ပြောတော့ကောင်မလေး နောင်ဆင်ခြင်ပါမယ့်လို့ပြောပါတယ်။
ပျက်စီးအောင် မလုပ်ရဘူးလို့ပြောတော့ ပွဲကြည့်ပရိသတ်က အသံတိုးတိုးလေးနဲ့ထောက်ခံကြပါတယ်။
အဲဒီမှာ အိမ်ရှင်ဘက်က အစွာမလေးက
သူ့ထမီဗွက်ပေတာ ပြန်လျှော်ရင်လည်းရတယ် အသစ်ပြန်ဝယ်ရင်လဲဖြစ်တယ်။
သူ့တို့အကိုတွေမောင်တွေ ခဲအိုတွေ ထမီအောက်ဝင်လို့ဘုန်းနိမ့်တာ ဘာနဲ့ပြန်အလျှော်ပေးမှာလဲလို့မေးတော့
အဲဒီမှာ သူတို့ အိမ်အကြောင်းသိနေတဲ့ဗမာပေါင်ချိန်က မေးခွန်းတွေမေးပါတော့တယ်။
“ကျမတို့ ညီအမအပျို သုံးယောက်ရယ် အဖေနဲ့ အမေရယ်က အပေါ်ထပ်မှာနေကြတယ်။
အောက်ထပ်က မောင်လေးနဲ့အကိုက တစ်ခန်း အမတို့လင်မယားက တစ်ခန်းနေတယ်”
“ဒါဆိုရင် နင်တို့အိမ်ကယောက်ျားတွေဘုန်းနိမ့်တာ ကောင်မလေးထမီလှန်းတာနဲ့ မဆိုင်ဘူး”လို့
ပြောတော့ အိမ်ရှင်ဘက်ကလူတွေက “ဘက်မလိုက်ပါနဲ့”လို့ဝိုင်းပြောကြပါတယ်။
“ကဲဒါဆို နင်တို့က ထမီအောက်ကနေဖြတ်သွားလို့ထမီအောက်ရောက်လို့ ဘုန်းနိမ့်တာကိုလက်ခံတယ်ပေါ့”
လို့မေးတော့ “ဒါအမှန်တရားဘဲလေ”လို့ ၀ိုင်းဖြေကြပါတယ်။
“အေး အဲဒါဆိုရင် နင်တို့အိမ်ကလူတွေဘုန်းနိမ့်တာ နုင်တို့ကြောင့်ဘဲဖြစ်ရမယ်။
အဲတော့ နင်တို့အိမ်က မိန်းမတွေ အ်ိမ်ပေါ်တက်ရင် ထမီမပါဘဲ တက်ကြသလား၊”
လို့လဲမေးလိုက်ရော ဝေါကနဲရီသံကြီးထွက်လာပြီး ပြဿနာပြီးသွားပါတယ်။
“မင်းတို့ကွာ ဘာမဟုတ်တာလေးကို ပြဿနာကြီးဖြစ်အောင်လုပ်တယ်။
ဘေးလူတွေကလဲ ကိစ္စလေးတစ်ခုဖြစ်လာရင် သင့်မြတ်အောင်လုပ်ပေးမယ်မရှိဘူး။
အေးဒါပေမယ့် ရှေးအယူလက်မခံဘူးကွဆိုပြီး ဖင်ပိတ်ငြင်းဘိုလဲမလိုဘူး။
သန်းလွင်ပြောအပြီးမှာတော့ ထမီအောက်ဝင်ရင်ဘုန်းနိမ့်တယ် မနိမ့်ဘူးဆိုတဲ့ ပြဿနာလဲ
ကဲခင်ဗျားတို့ရော ဘယ်လိုထင်သလဲ ပြောကြည့်ပါအုံး………………………………..
မဝေရေးတာ ဖတ်ပြီးတော့ ကြားဘူးတာလေးပြန်ရေးကြည့်မိတာလေးပါ။
ရန်ကုန်က ၈ ထပ်တိုက်တွေ မှာ ထဘီတွေလှမ်းကြပါတယ်ဗျာ။
အောက်ကလည်း ဘုန်းကြီးတွေရော ယောင်္ကျားတွေရော သွားနေလာနေကြတော့
အင်း ဘုန်းရှိသော ယောင်္ကျား ရှိမယ် မထင်..။ ရန်ကုန်မြို့မှာ ပြောပါတယ်။
ဒါမျိုးက.. တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့.. နှစ်ရာချီပြီးဖြစ်နေ..ဖြစ်လာမှာတွေပါ..။
ပြဿနာဖြစ်စေတဲ့.. အရင်းအမြစ်ကို မရှင်းနိုင်သမျှ..ဖြစ်နေမှာပဲ..။
ကြေအေးလိုက်တယ်ထားဦး.. ကုန်သွားတဲ့.. အချိန်. လုပ်အား..ငွေကြေး.. နိုင်ငံတော်အနေနဲ့ ဆုံးသွားတာပါ…။
တခြားနိုင်ငံတွေမှာ.. ဒါမျိုးငြင်းစရာ..ပြဿနာဖြစ်စရာမှ မရှိတာနော..။
မဟနလို.. အဖွဲ့မျိုးက.. “မိန်းမအောက်.. ထမီ(ထမိန်)အောက်ဝင်ခြင်းသည် လူသားဘုန်းကံနိမ့်ခြင်းမရှိ “လို့ တရားဝင်စာထုတ်ပေးသင့်တယ်…ထင်မိတယ်.။
လူဆိုသည်မှာ..(ရိုင်းရိုင်းရေးရရင်) မိန်းမပေါင်၂ချောင်းကြားက ထွက်လာသူချည်းပဲ မဟုတ်ပါလား..။
သူကြီးကလဲ အခုခေတ်ကလေးတွေ ပေါင်နှစ်ချောင်းကြားက မထွက်ကျတော့ဘူးဗျ
ဗေဒင်ဆရာပြေတဲ့ အတိုင်း ခွဲမွေးကျလွန်းလို့ ဗိုက်ထဲက ထွက်ကျတာ ဗျ
သူကြီး ကလဲ ဗျာ…. ထစ်ကနဲရှိ နိုင်ငံခြားနဲ. နိုင်းလိုက်.. နိုင်ငံတော်က အင်အားတွေဆုံး ရှုံးတယ်ပြောလိုက်နဲ. ..အမှန်က နတ်တွေ အယူသီးမှုတွေ ရိုသေကိုင်းရှိုင်းမှုတွေကဘဲ မြန်မာလူမျိူးဆိုပြီး ဖြစ်စေတာမဟုတ်လား..
ကိုယ့် စတိုင် နဲ. ကိုယ်ပေါ့ဗျာ…… ခုသူကြီးက ယောက်ခမ က သမက် ကို အပြစ် လိုက်ရှာနေ
ဒီတစ်ခါမှာတော့ ကိုခိုင်နဲ့ကိုပေါက် အမြင်တူပါကြောင်း။
အမြင်တင့်တယ်ခြင်း မတင့်တယ်ခြင်းကတော့ လူ့ယဉ်ကျေးမှု့နဲ့တိုက်ရိုက်ပါတ်သတ်တော့
လူပျိုကြီး ၊ အပျိုကြီးတွေ လောက်ဘဲ အဲဒီလို အစွဲကြီးတော့မယ် ထင်ပါတယ် ။
ဗမာပေါင်ချိန်ဦးလှဖေကို လူတိုင်းလက်ခံနိုင်လောက်တဲ့ အဆုံးအဖြတ်ကို ပေးနိုင်လို့ လေးစားတယ်။ ပြဿနာတခုဖြစ်လာရင် တည့်တည့်မတ်မတ်ဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်ဖို့ စဉ်းစားတွေးခေါ်ဥာဏ်ရှိပြီး သမာသမတ်ရှိတဲ့ လူကြီးလူကောင်းက အရေးကြီးတယ်။
မဝေနဲ့ ကိုပေါက်ပြောသလို ရှေးရိုးစွဲ အသားကျနေတဲ့ ပုံစံခွက်ထဲက ရုန်းထွက်ဖို့ ကြိုးစားကြဖို့ လိုပါတယ်။
သင်္ဘော နဲ့ခရီးသွားရင်ယောက်ျားတင် မက သံဃာတော်တွေပါ မိန်းမတွေအောက်ကဖြတ်လျှောက်ရပါတယ်၊
ဒီကိစ္စအတွက် သံဃာတွေ ခရီးသွားပြီးရင် အာပတ်ဖြေ ကြရပါသလား၊ စဉ်းစားစရာပါ၊ ဒီကိစ္စတွေ ပြောရတာ တော်တော်ခွကျပါတယ်၊ကျွန်တော်အခု နေ နေတာက ရှေးရိုးစွဲများတဲ့ တောမြို့လေးတစ်ခုဆိုတော့ တစ်ခါတစ်ခါ ပြောဖြစ်ကြရင် ကိုယ်က အလျှော့ပေးရတာများပါတယ်။ ရေများရေနိုင် မီးများမီးနိုင်ပေါ့
ဆရာပေါက်ရေ လှမ်းထားလိုက်တဲ့အ၀တ်တွေများ ပြောမပြောချင်တော့ဘူး
ဘရာစီယာတွေ အောက်ခံဘောင်းဘီတွေပါ လှမ်းထားကြတာ
ဒီဇလုံ ညခြေဆေးတော့လဲဒီဇလုံ ဘဲဗျို………
ကိုရင်မောင်ပြောတာ ဟုတ်ပါတယ် …
ဗလချိုက်တွေလဲ အတူတူပဲ … ခေါင်းရင်းက ကုတင်တိုင်မှာတောင် အတွင်းခံဘောင်းဘီကို ချိတ်ပြီးလှမ်းကြတာပဲ … ဘာမှ အယူမရှိတော့လဲ ဘာမှမဖြစ်ဘူးပေါ့ …
တရုတ်တွေ ကောင်မလေးတွေကို ကုန်းပိုးနေတာ (လမ်းမပေါ်တွေမှာ) …
ကောင်မလေးဖိနပ်ကြိုးတွေကိုလဲ ကောင်လေးတွေက ငုံ့ပြီးချည်ပေးတာပဲ … ကောင်မလေးအိပ်ကို ကောင်လေးက လွယ်ပေးတာပဲ … အိမ်မှာလဲ မီးဖိုချောင်မှာ ကောင်လေးက ၀င်ချက်ပေးတာပဲ ….
အမျိုးသား အမျိုးသမီးခွဲခြားတာမတွေ့ရပဲ တန်းတူအခွင့်အရေးနဲ့ အလုပ်အကိုင်များ အဆင်ပြေချောမွေ့နေတာပဲ …
လူတွေဆိုတော့လဲ အသိဥဏ်တွေက မြင့်လွန်း၊ အတွေးတွေကခေါင်ခိုက်၊
ဟိုလိမ် ဒီပိန် အဆင့်မြင့်အတွေးအခေါ်တွေနဲ့ လူ့သဘာဝ ကိစ္စရပ်တွေကို
ဖြေရှင်း၊ စွပ်စွဲ နေကြရတာနဲ့ ချာလပါတ်လည် နေတော့တာပဲ…၊
အမှန်က မွေးကတည်းက ဘုန်းကံ ဆိုတာကြီးက နိမ့်ပြီးသား…၊
Ko Kai ပြောသလို ပေါင်နှစ်ချောင်းကြားထဲ ထွက်လာကြတာလေ….။
( အမှားပါနိုင်တာမို့ ခွင့်လွှတ်ပေးကြပါ )
ထမီလှန်းတာလောက်က သိပ်ကိစ္စမရှိပါဘူး။ အတွင်ခံဘောင်းဘီတို့ဘရာစီယာတို့အပြင်မှာ မလှန်းရင်ပြီးတာပဲ။ လှန်းလည်း ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ ကိုယ့်ဆိုဒ် လူသိမှာ စိုးလို့ ပါ
ဟိုးအရင်ကတော့ သာမန်လူတန်းစားသည် မြေစိုက်အိမ်၊ တထပ်အိမ်များမှာသာ အနေများပြီး အိမ်အမြင့်၊ အုတ်တိုက်၊ နှစ်ထပ်ဆိုရင် ဘုန်ကြီးကျောင်း၊ မင်းစိုးကနားနဲ့ လူချမ်းသာများသာ တတ်နိုင်ကြလို့ ဖြစ်လာတာထင်ပါတယ်။ ဘုန်းကြီးလို့ ရဟန်း၊ မင်းမျိုး သူဌေးဖြစ်ရတာကိုး (သဂျီးလိုပေါ့ဗျာ :eek: ) တော်ရုံကြိုးတန်းအောက် ဝင်စရာမရှိ၊ မိမိဦးခေါင်းအထက်မှာလည်း ကိုယ့်ထက်နိမ့်ပါးတဲ့သူ မနေနိုင်ဘူး။ နောက်ပိုင်း ခေတ်ကာလတွေပြောင်းကုန်တော့ ဒီအယူအဆတွေလည်း နည်းကုန်တယ်။ ကြိုးတန်းအောက်ဝင်၊ တမင်တကာလုပ်ထားတဲ့ နေရာအောက်ဝင်တာလောက်ပဲ ကျန်တော့တယ်။ နောက်တခုက ဘုန်းကံတခုထဲ သက်သက်ပြောတာ မဟုတ်ဘူး။ အစီအရင် လက်ဖွဲ့အင်းအိုင်တွေနဲ့လည်း ဆိုင်သေးတယ်။ အဲဒီအရာတွေကို နတ်၊ တန်ခိုးရှင်တွေ စောင့်တယ်လို့ ယုံကြည်ကြတယ်။ အဲဒါတွေကို ယုံကြည်မှုရှိရင်၊ အသုံးပြုနေရင် သူတို့နဲ့ သွားဆွေးနွေးမှ ရမယ်။ မယုံဘူးဆိုရင် ဘာအရေးလဲ၊ လုပ်ချင်တာ လုပ်ပေါ့။ သဂျီးဆို မနဲ့ဆွဲထုတ်ရတယ်၊ (ဘီယာမူးပြီး ကြွက်တွင်းထဲ ခေါင်းစိုက်သွားလို့ )
ကျနော် မြန်မာပြည်မှာ ရှိစဉ် ဘေးဝရန်တာအတွင်းကြိုးမှာ လှမ်းထားတဲ့ အမေ့ထမီ၊ အမထမီများကို ကြုံကြိုက်လို့၊ မိုးရွာလို့ ရုတ်ပေးရင် မြင်သူအချို့ ထူးဆန်းသလို ကြည့်တယ်။ အမှန်တော့ အဖေက မလုပ်ရင် ဆဲမှာစိုးလို့၊ နောက်တော့ အမေက ကျေနပ်သလို ရှိတာ မြင်တာနဲ့ လုပ်ပေးမိတယ်။ သို့သော် မိန်းမအသုံးအဆောင် ပစ္စည်းလှမ်းတဲ့ ကြိုးတန်းလို့ မသင်္ကာရင်တော့ ဘုန်းနိမ့်မှာတော့ အကြောက်သားဗျ။ မရှောင်နိုင်ရင်တော့ သံဗုဒ္ဓေရွတ် သွားရတာပဲ။ နိုင်ငံဂျားရောက်တော့ ဒါမျိုးဆိုတာ ရှောင်ဖို့ အတော်ခက်တယ်။ ဆိုင်မှာ အဝတ်လျှော်ရင် ယောက်ျား၊မိန်းမ ခွဲလို့ဘယ်ရမလဲ။ အစွဲဆိုတော ပြောရတော့ ခက်တယ်။ စကပ်၊ မိန်းမဝတ် ဘောင်းဘီတို၊ ရှည်များကို မြင်ရလို့ စိတ်ထဲ မသိုးမသန့် မဖြစ်ဘူး။ အတွင်းခံ၊ ထမီ စတာတွေ မြင်ရရင်တော့ ဘုန်းကံဆိုတာ ခေါင်းထဲ ဝင်လာတယ်။ အကောင်းဆုံးကတော့ သဂျီးဘာပြောပြော ဝိုင်းဆဲကြပါဗျာ။ :mad:
အယူသည်းတာ ဘယ်နေရာမှာမှ မကောင်းပါ။
အမြင်တင့်တယ်တာ မတင့်တယ်တာ နဲ့ပဲ ပြောဆိုဆုံးဖြတ်သင့်ပါတယ်။
ဘုန်းတန်ခိုး ထိခိုက်တယ်လို့ လက်မခံပါ။
မိန်းကလေးအတွင်း အဝတ်တန်ဆာ ပစ္စည်းတွေဟာ လူမြင်ကွင်းမှာ ရှိမနေသင့်ဘူး
ဘုန်း ဆိုတဲ့ ပြသာနာက
ညာလက်ရုံး ခေါင်းအုံးအိပ်ရင် ဘုန်းနိမ့်တယ် ဆိုပဲ ။
ကျွန်တော် နဲ့ကျွန်တော့် ကောင်မလေးတွေ အတူ အိပ်တဲ့ အခါကျရင် သူတို့ ကို
ဘယ်လက်မောင်းကဗျာ သွေးလွှတ်ကြော သွေးပြန်ကြောတွေနဲ့တိုက်ရိုက် ပတ်သပ်နေတော့
အဲဒီဖက်မှာ ပေးအိပ်ရင် ခဏလေး အတွင်းမှာပဲ လက်တွေက ထုံကျင်လာရော ။
ညာလက်မောင်းက တော်တော်လေး အဆင်ပြေသကိုး ဘယ်လက်မောင်းထက်စာရင် ။
ဘုရားရှင်တို့ မည်သည် ညာဖက်သို့ သာ စောင်းပြီး လဲလျောင်းသော သဘာဝရှိတယ်လို့ 
ကြားဖူးပါတယ် ။ ဒါကလဲ ဒါပေါ့ ။ ယူတတ်ရင် အသိပေါင်းစုံပါပဲ ။
အ၀တ်အစားကို လျှော်စက်ထဲမှာ ထည့်ပြီး လျှော်တဲ့ အခါ ကျွန်တော်တွေးတဲ့ အဓိက အချက်က
အလွန်ကို အချိန်မပေးနိုင်တဲ့ လက်ရှိ လူနေမှု အနေအထားမှာ ကိုယ့်ရဲ့မဖြစ်မနေလုပ်ရမဲ့
လူနေမှု ကိစ္စတွေကို အချိန်ကုန်သက်သာအောင် ဘယ်လို ဖြေရှင်းမလဲ ဆိုတာရယ် အရောင် အစွန်း
အထင်းမရှိအောင် ဘာနဲ့ ဘာနဲ့ တွဲပြီး လျှော်မလဲ ဆိုတာမျိုးကို တွေးပါတယ်။
လျှော်စက် နဲ့ လျှော်တဲ့ လူနဲ့သာမာန် လက်လျှော် လူ နဲ့ တော့ အယူအဆခြင်းကွဲပြားနိုင်ပေမဲ့
မစင်ဆိုတာဟာ မစားခင် အချိန်အထိတော့ ထမင်းဖြစ်ခဲ့တယ် ဆိုတာပါပဲ ။
သူတပါးနိုင်ငံမှာနေစဉ် ကာလက အတူနေ မိန်းကလေးနဲ့ကျွန်တော့ရဲ့အ၀တ်တွေကို
လျှော်တဲ့ အခါ မိန်းမ အတွင်းခံမို့ လို့အတူ မလျှော်နိုင်ဘူးဆိုတာကို တွေးဖို့အချိန် မရှိလောက်
အောင်ကို အလုပ်များပါတယ် ။ မြန်မာပြည်မှာ အရင် ခေတ်က ပြန်လည်လျှော်ဖွတ်သုံးစွဲ ခဲ့သလိုမျိုးပဲ
အတွင်းခံ မကလို့သူတို့ ရဲ့ လစဉ်သုံး ပစ္စည်းက ကမ္ဘာပေါ်မှာ လက်ကျန်မရှိတော့လို့လျှော်ဖွတ်ရမယ်
ဆိုရင် အနည်းဆုံးတော့ ကျွန်တော့ အတွင်းခံတွေနဲ့ အတူ လျှော်ဖွတ်ရမှာပါ ။
တခုပဲရှိတာက အရောင်တူ ရွေးချယ်မှုနဲ့ ပဲ ခွဲခြားမှုဆိုတာပဲ ရှိလာမယ် ။ အရောင်စွန်းထင်းရင်
အထည်ပျက်စီးမယ်လေ ။ တချို့ အ၀တ်တွေက ဆိုးဆေးက အရောင်ကျွတ် လွယ်တော့ ။
ကျွန်တော် မိန်းမပေါင်းများစွာရဲ့ပေါင်ပေါ်မျာ ခေါင်းအုံးပြီး အိပ်ခဲ့ဖူးတယ် ။
သူတို့ က ပြောရှာပါတယ် ။ ဘုန်းနိမ့်မယ်တဲ့ ။
ပေါင်ပေါ်မှာ ခေါင်းတင်အိပ်ရင်း ကျွန်တော် ၀န်ခံခဲ့ပါတယ် ။
စိတ်မပူပါနဲ့။ မိခင်လောင်း တစ်ယောက်ရဲ့အလွန်နူးညံ့တဲ့ နေရာမှာ အိပ်ခွင့်ရတာဟာ
ငါက သိပ်ပြီး ကုသိုလ်ကံ ထူးလို့ ပါ ။ ငါ့အမေရဲ့ဟောဒီနေရာ တဖြစ်တလဲ ငါ့ရဲ့ လူ့ ပြည်
တံခါး အ၀ဟာ ဟောဒီ ဘုန်းနိမ့်မယ် ဆိုတဲ့ ထမီအောက်မှာ ရှိနေတာပါလို့။
ဆိုတော့… သူတို့ ဟာ ကျွန်တော့်ကို အလွန် ချစ်မြတ်နိုးကျပါတယ် ။
သူတို့ ရဲ့စိုးရွံ့ နေတဲ့ တံတိုင်းတခုရဲ့ နောက်ကွယ်က အမှန်တရားကို လက်ခံပေးနိုင်လို့ ပါပဲ။
ကျွန်တော် ဘယ်တုန်းကမှ ဘုန်းမနိမ့်ခဲ့ပါဘူး ။ကံနိမ့်တယ် ဆိုတာလဲ မရှိခဲ့ပါဘူး ။
မိခင်လောင်းတွေကို ရိုသေ မြတ်နိုး လေးစား အသိအမှတ်ပြုတဲ့ စိတ်နဲ့ ဆက်ဆံခဲ့တဲ့ အတွက်
အရာရာတိုင်းဟာ အဆင်ပြေလွန်းမက ပြေခဲ့သလို ပြေနေဆဲဖြစ်သလို ရှေ့ လျှောက်လဲ ပြေနေဦးမှာပါ။
နောက်ဆုံး တခွန်းလောက်ပြောပရစေ ။ ခွင့်လွတ်ပါ ကိုပေါက် ။
ဘုန်းနိမ့်မယ် ဆိုလို့လျှာဖြတ်ခံရမယ် ဆိုရင် လျှာဖြတ်ခံရမဲ့ အလုပ် ကို လုပ်တဲ့ ယောကျာင်္းတွေ
တောင်လို ပုံနေမည့် အထဲမှာ ကျွန်တော်က ထိပ်ဆုံးက ပါနေပါတယ် ။
ဟီးဟီး …ကဏန်းကြီးရဲ့ … ကော့မန့်တွေ ဖတ်ရတဲ့အထဲ ဒီကော့မန့်ကို အကြိုက်ဆုံးပဲ … ။
ပြောရင်းပြောရင်း … သူ့ အကြောင်းတွေလည်း ကုန်သလောက်ရှိပြီ
မြို့မှာ နေတဲ့ လူတွေကတော့ ဒါမျိုးတွေ က အယူသိပ်မရှိတော့ဘူး ထင်ပါတယ်။
အဲလို ဘုန်းနိမ့်တယ်တာ ဆိုရင် မြေအောက်လှိုင်ခေါင်း ဘယ်ဖောက်တော့မလဲနော်..
စစ်ဖြစ်နေတုန်း ဗုံးခိုကျင်းထဲ ဘုန်းနိမ့်မှာ စိုးလို့ အထက်ကနေ ပေါ်ပေါ်တင်တင် လျှောက်ကြည့်ပါလား..
စစ်ဆိုတာ တောထဲမှာပဲ ဖြစ်တာ မိန်းမ မရှိလို့ မငြင်းနဲ့နော်.. ဗီယမ်နာမ်က ကူချီ ဥမင်လှိုင်ခေါင်းနဲ့ တရုတ်ပြည်က မော်စီတုန်း ခေတ်တုန်းက လုပ်ခဲ့တဲ့ လှိုင်ခေါင်းတွေ စသဖြင့် စသဖြင့်.. ပေါ့.. နိုင်ငံက အကြီးအကဲ အုပ်ချုပ်သူတွေက အစ လူတွေရဲ့ အောက်ကနေ လူတွေ သွားလာပြီး လွတ်လမ်း အတွက် လုပ်ရတာပါပဲ။ ဆာဒမ်ဟူစိန် ဆိုရင် ကြွက်တွင်းထဲက ရတာတဲ့.. သူလည်း ကြွက်တွင်းဝ ကို ထမိန်အုပ်ပြီး ဘုန်းနိမ့်အောင် လုပ်ခံရပြီး အဖမ်းခံရတာလား မသိဘူးနော်.. ဟိဟိ..
တော်သေးတယ်..မြန်မာပေါင်ချိန် ဥာဏ်ကောင်းသွားလို့ ပေါ့..
နို့ မို့ ဆို လွယ်ဘူး….
ဟုတ်ပဗျာ ကျွန်တော်တို. လူမျိုးတွေက မလိုလားအပ်တဲ့ အယူသီးမှုတွေကြောင့် တိုးတက်သင့်သလောက်မတိုးတက်ကြတာ…
ဘုန်းနိမ်.မှာဆိုးလို. မလုပ်ပဲထားရင် ဘာမှကို လုပ်လို.ရမှာမဟုတ်တော့ဘူး…
ခေတ်သစ်မဟော်သဓာ ဦးလှဖေ ကိုတော့ ချီးကျူးသဗျာ…
ဒီမှာလည်း ဒီနေ့ အတွင်းခံတွေ တန်းစီလို့ ကလစ်လေးတွေနဲ့ ချိပ်ပြီးလှန်းထားတာများ တလွင့်လွင့်။ နောက်နေ့ကြတော့ ယောက်ကျား အင်္ကျီတွေ ချိပ်လှန်းလို့။ အ၀တ်လျှော်စက်ထဲ အတူတူလည်း ထည့်လျှော်တာပဲ။ ဘုန်းနိမ့်ကြေးသာဆို ဒီဂျုးတွေ တယောက်မှ ထွန်းပေါက်မှာ မဟုတ် အခုတော့ တော်လိုက်ကြတာ။ ကျွန်မတို့ ရန်ကုန်အိမ်မှာလည်း ကျွန်မတို့ အလုပ်သွားလို့ အပြင်မှာ လုံချည်တွေ လှန်းခဲ့ရင် မိုးရွာလာတာနဲ့ မောင်လေးတွေက ရုပ်ပေးတာပါပဲ။ အမြင်မတော်မှာ စိုးလို့သာ လုံချည်တွေကို နောက်ဖေးဘက်မှာ လှန်းတာပဲရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ တချို့လူတွေကတော့ တော်တော်ကို အယူသည်းတာ။
တတပ်တအား.. ကြယ်ငါးလေးတွေ… ၀ိုင်းပစ်ပေးတာကြောင့်.. ခုခေတ်လူတွေအယူမသီးဘူး ဖြစ်လာတယ်ဆို.. ယုံမလား..။
လွတ်လပ်စွာ ရေးသားပြောဆိုနိုင်ခြင်းရဲ့.. တန်ဖိုးတခုပေါ့..။
ဒီဖူးစာရှင်လေးဆိုက် က ပိုပြီးအားရပါးရကိုရေးကြတာ။
လေးပေါက်ရေ … အရမ်းကောင်းတဲ့ ပို့စ်လေးပါပဲ … ။
အလုပ်များနေတာနဲ့ .. အခုမှပဲ ဖတ်မိတယ် … အဖတ်နောက်ကျရလေခြင်းလို့ အားမလိုအားမရဖြစ်မိတယ် … ။
အယူဆွဲတာကတော့ ရှေးလူကြီး အများစုမှာသာရှိတာပါ .. ဒီခေတ်မှာ အထိုက်အလျှောက် အယူဆွဲမှုတွေ လျော့ပါးကုန်ကြပါပြီ … အထူးသဖြင့် လက်တွေ့ကျကျလူငယ်တွေကြားမှာ အယူသီးမှုကတော့ အနည်းငယ်လောက်ပဲ ကျန်တော့တယ် … ။
သမီးလည်း အရင်က ဒီကိစ္စလိုမျိုး တွေးမိတယ် … ။ အရင်က အရမ်းကို ရွံတတ်တာ … အိမ်နောက်ဖေးခန်းမှာတောင် ထမင်းမစားဘူး … အဲ့လို .. အဲ့လို .. ဇီဇာလည်းကြောင်သေးတယ် .. ။ အမေ့အိမ်မှာ ပြန်နေတုန်းက သုံးလွှာဆိုတော့ အပေါ်ထပ်ရော ၊ အောက်ထပ်ရော ရှိတဲ့…… ကြားအခန်းဖြစ်နေတယ် .. ဒီတော့ …. ပြန်တွေးမိတာက .. ကိုယ်အိမ်သာထဲဝင်တဲ့အချိန် သူများအိမ်သာက ကိုယ့်ခေါင်းပေါ်ရောက်နေပါလားဆိုပြီးတော့လေ … ။ တွေးမိမိချင်း အိပ်လို့တောင်မပျော်ဘူး ရွံလွန်းလို့လေ … ။ နောက်မှ တွေးကြည့်တာ … တခြားအိမ်တွေ အလည်သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ ရုံးတက်ရုံးဆင်းလုပ်ရတာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီကိစ္စမျိုးကတော့ ရှိနေဦးမှာပဲ … ဘာမှသိပ်မတွေးတော့ဘူးလို့ စိတ်ကိုထားလိုက်တော့မှ အခုလို ထောင်ကျကျ ၊ ပြားကျကျ ဖြစ်သွားတာ … ။
အခုခေတ်လူငယ်တွေက အဲ့လိုမျိုးအယူတွေမရှိသလို အယူလဲမသီးကြတော့ပါဘူး …။ ဟိုးရှေးရိုးစွဲ လူကြီးတွေအနဲအကျဉ်းလောက်သာ အဲ့လိုအယူတွေရှိနေကြသေးတာပါ…။